Guuxii Reer Gebiley oo maanta ku dhamaaday ceeb iyo sumcad xumo ka dib markii ay tiirkhda somaliland dhacday in madaxweyne lagu soo dhoweeyo Kabo | Somaliland Hargeisa City
Guuxii Reer Gebiley oo maanta ku dhamaaday ceeb iyo sumcad xumo ka dib markii ay tiirkhda somaliland dhacday in madaxweyne lagu soo dhoweeyo Kabo
Runtii waxa meesha ka dhacday Gebiley, waxa ay ahayd ceeb aad iyo aad u fool xun, taariikhadana ku suntan. Dadka reer Gebiley oo ah dad wanaagsan, ayaa maantaa wixii halkaa ka dhacay dad badan oo somalilandar ahi gudo iyo dibedba ku noqodtay shookh/naxdin. Waxaan wanaagsan in reer Gabiley ay raali gelin ka siiyaan shacabka reer Somaliland ee gudo iyo dibedba jooga, arrintaas foosha xun ee meesha ka dhacday. Waxa ay furaysaa albaab fool xun arrintani.
SDWO (Gebiley 27/07/2011) Madaxweyne Siilaanyo iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa saaka ka jarmaaday magaalada Hargeysa iyagoo ku sii jeeda magaalada Borama oo uu kaga qaybgelayo xaflada qalinjibinta Ardayda Jaamacada Camuud.
Madaxweynaha ayaa markii uu sii dhexmarayey gebileyay ayaa wadad dheer waxa u sii istaagay dad farobadan. Dadkan qaarkood ayaa qaylo kala hortagey Madaxweynaha iyagoo kaboohga kor u taageyey oo ay ku soo dhoweyeen kabo.
Ilaa hada lama garan karo ujeedada ka danbaysay in lagu mudaharaado Madaxweyne Siilaanyo, laakiin waxa loo aanaynayaa uun cabashooyin iyo tabashooyin badan oo ka soo baxayey reer Gebilay tan iyo intii talada dalka uu ku guulaystay xisbiga Kulmiye. Dadweynaha ayaa aad isku weydiinayay maanta waxa ay reer Gebiley ka cabanayaan ee ay kaaga cabanayaan reer Somaliland ta kale inay iyaga wax ka maqanyahiin, isla markaasna sameeyaan waxaan hore taariikhda somaliland uga dhicin oo ah in madaxweyne Somaliland ah uu gobol ka mid ah gobolada dalku ay kabo ku soo dhoweeeyaan.
Dhinaca kale waxaad arkaysay dadweyne kale oo badan oo iyagu madaxweynaha sacab iyo sawaxan ku soo dhoweeyay. Tani oo meesha ka saaraysa in reer Gebiley oo dhami aanay madaxweynaha ku mudaharaadin, ee mudaharaadka ay sameeyaan tiro badan oo ka tirsan dadka degama magaalada Gebiley. Madaxweynaha ayaa la filyaa inuu ku hakandoono marka uu ka soo laabto Borama isagoo kulano la yeelandoona odayaasha gobolka, isla markaasna soo indho indheyndoona mashaariicda laga hirgeliyay gobolka Gebiley.
Wado cusub oo laga hirgeliyey intii ay jirtay xukuumadan cusubi oo dhamaad ku dhow
Waa markii u horeysay ee madaxweyne Siilaanyo uu socdaal ku tago gobolada galbeedka tan iyo markii loo dhaariyey xilka madaxweynenimada 27kii Julay 2011 oo ay maanta ku buuxdo hal sano.
Source: text+photo: SDWO
« Halkan ka daawo video booqashadii madaxweynaha Somaliland Ahmed M.M Siilaanyo
Somaliland: The former British colony that shows Africa doesn’t need our millions to flourish »